Maxay ku dhamaadeen Champions League kulamadiisii caawa? Liverpool iyo Sevilla yaa badiye?
Thursday, July 19th, 2018 - 07:04:51
Wednesday September 13, 2017 - 23:56:03 in Wararka by Ak Caqil
Arbaco--- Norrköping, Sweden
Natiijooyinka kulamadii Champions League ee caawa la ciyaaray ayaa waxaa ay ku dhamaadeen sidaani.
Qeybta E waxaa wada ciyaaray Kooxaha Liverpool iyo Sevilla ciyaartaan oo xamaasad laheed waxaa ay aheed ciyaar kulul oo indho qabad leh. Waxaa ay ku soo idlaatay 2-2 waloow Firminio uu rigoore ka qasaariye Liverpool halka Sevilla ay daqiiqad ayadoo ay ciyaarta ka hartay uu Muriel laacibkii hore ee Sampdoria uu ka qasaariye Kubad asiga iyo goolhayaha Liverpool ay kali ku ahaayeen.
Isla qeybtaas waxaa kulmay Maribor iyo Spartak Moscow oo 1-1 ku kala baxay.
Qeybt F waxaa ku wada loolamay Feyenoord oo Holland ah iyo Man City waxaana 4-0 ku adkaatay Kooxda martida aheed ee City. Halka Napoli ay guuldaro qaraar kala kulantay dhigeeda Shakhtar Donetsk oo 2-1 kaga adkaatay.
Qeybta G waxaa ku kulmay Kooxaha FC Porto iyo Besiktas waxaana adkaatay Besiktas oo marti aheed ayagoo 3-1 kaga adkaaday FC Porto. Halka Kooxda Monaco ay barbaro 1-1 ah Germany kula soo gashay Kooxda ku cusub Koobkaan ee RasenBallsport Leipzig.
Qeybta H oo laheed xamaasad gooni ah gaar ahaan Kooxda Tottenham markii ay marti galisay dhigeeda Dortmund ciyaar ka dhacday Wembley ayaa ku soo idlaatay 3-1 ay guusha ku raacday Spurs oo marti loo ahaa.
Halka Kooxda Koobka qaaday labadii sano ee tagtay ay Santiago Bernabeu Stadium ay ku marti qaaday Kooxda Apoel ayagoo 3-0 dirat Ramos ayaa gool u dhaliye halka Ronaldo uu labada kale u dhaliye.
Dhinaca kale kulamadaan ayaa ahaa kuwa cajiib ah caawa la ciyaaray, Champions League ayaa soo laabtay todobaadkaan.